ဒီတစ်ခါလည်း ကိုပိုင်တံခွန် ဘာကောင်လေးထပ်မွေးလဲဆိုတာ ပရိသတ်ကြီးကြည့်လိုက်ကြအုံးနော်…??????? – Cele Oscar
ဒီတစ်ခါလည်း ကိုပိုင်တံခွန် ဘာကောင်လေးထပ်မွေးလဲဆိုတာ ပရိသတ်ကြီးကြည့်လိုက်ကြအုံးနော်…???????
June 23, 2022 By L YC Celebrity
မွနျမာမှာသာမက ကမ်ဘာတဈဝှမျးမှာပါ ရုပျအခြောဆုံး စာရငျးထဲပါဝငျပွီး လူကွိုကျမြားကွတဲ့ မငျးသားခြော ပိုငျတံခှနျ ဟာ အနုပညာ မှာထူးခြှနျလို့ ကြျောကွားသလို တိရစ်ဆာနျလေးတှကေို အရမျးခဈြတတျတဲ့ သူ့စိတျနစေိတျထားကွောငျ့လညျး လူသိမြားကြျောကွားတဲ့ အနုပညာရှငျတဈဦးဖွဈပါတယျ။
ပိုငျတံခှနျ ဟာ တိရစ်ဆာနျလေးတှကေို သားသမီးအရငျးသဖှယျ တအားခဈြခငျ တာကွောငျ့ သူ့အိမျမှာ တိပေါငျးစုံကို မှေးမွူထားတာ ဖွဈပါတယျ။ သူ့ရဲ့နအေိမျမှာ ခှေး ၊ ကွောငျ ၊ ဆိတျ ၊ ပုတျသငျညို ၊ ရဘေဝဲ ၊ ကွှကျ ၊ ငါး ၊ လိပျ အစရှိတဲ့ သတ်တဝါပေါငျးမြားစှာ ကို မှေးမွူထားတာဖွဈပွီး အကုနျလုံးကိုလညျး ဂရုတစိုကျနဲ့ အမွဲ ခဈြခငျပေးသူ တိဖဖေေ တဈဦးဖွဈပါတယျ။
အခုအခါမှာလညျး ပိုငျတံခှနျ က သူ့နအေိမျမှာပဲ နောကျထပျ အိမျမှေးတိ အဖှဲ့ဝငျအသဈလေးဖွဈတဲ့ ခရုနှဈကောငျ ကို ထပျမံမှေးမွူလိုကျပါပွီ။ အဖှဲ့ဝငျအသဈ ဖွဈတဲ့ ခရုလေးနှဈကောငျ အကွောငျးကို ပိုငျတံခှနျက သူ့ရဲ့ Story မှာတငျလာတာဖွဈပါတယျ။ ပရိသတျတှေ အနနေဲ့လညျး ပိုငျတံခှနျ့ ရဲ့ ခရုလေးနှဈကောငျကို ကွညျ့ရှုနိုငျစရေနျဖျော ပွလိုကျရပါတယျ။
Credit . MMLoad
မြန်မာမှာသာမက ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှာပါ ရုပ်အချောဆုံး စာရင်းထဲပါဝင်ပြီး လူကြိုက်များကြတဲ့ မင်းသားချော ပိုင်တံခွန် ဟာ အနုပညာ မှာထူးချွန်လို့ ကျော်ကြားသလို တိရစ္ဆာန်လေးတွေကို အရမ်းချစ်တတ်တဲ့ သူ့စိတ်နေစိတ်ထားကြောင့်လည်း လူသိများကျော်ကြားတဲ့ အနုပညာရှင်တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။
ပိုင်တံခွန် ဟာ တိရစ္ဆာန်လေးတွေကို သားသမီးအရင်းသဖွယ် တအားချစ်ခင် တာကြောင့် သူ့အိမ်မှာ တိပေါင်းစုံကို မွေးမြူထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့နေအိမ်မှာ ခွေး ၊ ကြောင် ၊ ဆိတ် ၊ ပုတ်သင်ညို ၊ ရေဘဝဲ ၊ ကြွက် ၊ ငါး ၊ လိပ် အစရှိတဲ့ သတ္တဝါပေါင်းများစွာ ကို မွေးမြူထားတာဖြစ်ပြီး အကုန်လုံးကိုလည်း ဂရုတစိုက်နဲ့ အမြဲ ချစ်ခင်ပေးသူ တိဖေဖေ တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။
အခုအခါမှာလည်း ပိုင်တံခွန် က သူ့နေအိမ်မှာပဲ နောက်ထပ် အိမ်မွေးတိ အဖွဲ့ဝင်အသစ်လေးဖြစ်တဲ့ ခရုနှစ်ကောင် ကို ထပ်မံမွေးမြူလိုက်ပါပြီ။ အဖွဲ့ဝင်အသစ် ဖြစ်တဲ့ ခရုလေးနှစ်ကောင် အကြောင်းကို ပိုင်တံခွန်က သူ့ရဲ့ Story မှာတင်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ ပရိသတ်တွေ အနေနဲ့လည်း ပိုင်တံခွန့် ရဲ့ ခရုလေးနှစ်ကောင်ကို ကြည့်ရှုနိုင်စေရန်ဖော် ပြလိုက်ရပါတယ်။
နန်းသူဇာလေး စွံသွားလို့ ထပ်တူဝမ်းသာ တယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်းလေးပြောပြလာတဲ့နန်းမြတ်ဖြိုးသင်း…..
အစ်ကိုဖြစ်သူ ရေမွန်ရဲ့ ပုံတူလေးကို အမှတ်တရ အနေနဲ့ ခန္ဓာကိုယ် ပေါ်မှာ တတ်တူးထိုးခဲ့တဲ့ညီမဖြစ်သူလပြည့်ကဗျာ